ETCHER - MMEMME MULTIPLATFORM N'EFU KA ỊMEPỤTA NGWA MGBAGWOJU ANYA - IOS NA MACOS - 2019
Na nyochaa dị mfe a, nkenke banyere iji usoro free iji mepụta ihe nkedo draịvụ nke Etcher, uru ya (ihe dị mkpa bụrịrịrịrị amaokwu a n'elu) na otu mwepụ dị oke mkpa. Hụkwa: Usoro kachasị mma maka ịmepụta flash mbanye.
Iji Etcher mepụta USB nke nwere ike ịchọta site na mbiet
N'agbanyeghị enweghị asụsụ nke asụsụ Russian n'usoro ihe omume ahụ, ejiri m n'aka na ọ dịghị onye ọ bụla n'ime ndị ọrụ ga-enwe ajụjụ ọ bụla gbasara ederede USB flash na Etcher. Otú ọ dị, enwere ụfọdụ nuances (ha bụ mmezighị emezi), tupu ị gaa n'ihu, ana m akwado ịgụ banyere ha.
Ka ịmepụta ngwa USB flash na Etcher, ị ga-achọ ihe nchọta, ma ndepụta nke usoro nkwado dị mma - ndị a bụ ISO, BIN, DMG, DSK na ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịmepụta MacOS USB flash drive na Windows (Adịghị m ịnwale ya, enweghị m nyocha ọ bụla) ma ị ga-enwe ike ide akwụkwọ ntinye Linux site na MacOS ma ọ bụ os os ọ bụla (Ana m enye nhọrọ ndị a, dịka ha na-enwekarị nsogbu).
Ma ihe oyiyi Windows, ọ dị mwute ikwu na ihe omume ahụ dị njọ - Enweghị m ike ide ihe ọ bụla n'ime ha nke ọma, n'ihi ya, usoro ahụ nwere ihe ịga nke ọma, ma ihe kpatara ya bụ RAW flash drive, nke ị na-enweghị ike ịkwalite.
Usoro mgbe ịmalitere usoro ihe omume ahụ ga - abụ:
Pịa "Họrọ Foto" ma kọwaa ụzọ na mbiet ahụ.
Ọ bụrụ na ịhọrọ ihe oyiyi, usoro ihe a ga-egosi gị otu windo na nseta ihuenyo dị n'okpuru ebe a, ọ ga-abụ na ị gaghị enwe ike ịme ya ederede, ma ọ bụ mgbe ị na-edekọ ya agaghị enwe ike ịkwalite site na ọkụ ọkụ. Ọ bụrụ na enweghị ozi dị otú ahụ, o doro anya, ihe niile dị n'usoro.
Ọ bụrụ na ịkwesịrị ịgbanwe ụgbọala maka ịdekọ, pịa Gbanwee n'okpuru akara ngosi ụgbọala wee họrọ ụgbọala ọzọ.
Pịa "Flash!" Iji malite ndekọ. Rịba ama na a ga-ehichapụ data na ụgbọala ahụ.
Chere ruo mgbe ndekọ zuru ezu ma lelee ngwa mkpo ọkụ ahụ ederede.
N'ihi ya: usoro ihe omume ahụ nwere ihe niile iji dee ederede Linux - a na-ede ha nke ọma ma rụọ ọrụ site n'okpuru Windows, MacOS na Linux. Enwere ike idetu ederede Windows ugbu a (ma anaghị m achịkwa na ihe dị otú ahụ ga-egosi n'ọdịnihu). Dekọọ MacOS adịghị anwale.
E nwekwara nyocha na ihe omume ahụ mebiri USB flash drive (na ule m ọ napụrụ naanị faịlụ faịlụ, nke edoziri site nhazi usoro).
Download Etcher maka niile ewu OS dị maka free si ọrụ saịtị //etcher.io/